Yangu iPhone Mapurogiramu Haizogadzirise! Heino Kugadzirisa. - Iphone
sei foni yangu yakazvifonera
sei usingazivi iphone yangu 6 kubatanidza kune wifi
sei ndisingakwanise kudzima mafoto
vhidhiyo pane youtube wont play
iphone 4s maikorofoni isiri kushanda panguva yekufona
Yangu iPhone Mapurogiramu Haizogadzirise! Heinoi Fix.
Kugadziridza maapplication eApple kune yavo yazvino vhezheni inogara iri zano rakanaka - vanogadzira maapp vanoburitsa mitsva yekugadzirisa mabugs uye nekuunza maficha matsva nguva dzese Asi chii chaungaite kana ako maapplication eApp asingazogadzirise? Verenga pamusoro kuti uwane chii chirikuitika chaizvo kana maapps ako eApple asinga gadzirise uye dzidza dzimwe nzira dzakareruka dzaunogona kugadzirisa iyo iPhone app iyo isingatore kurira kubva kunyaradzo yeimba yako wega.
isina kunishuwarenzi yemotokari
Mhando mbiri dzeVashandisi ve iPhone
Kune mhando mbiri dzevanhu munyika: avo vasina hanya nezvizhinji zvidiki zvitsvuku zviyeuchidzo pane maPhones avo, uye avo vasingakwanise kuzorora zviri nyore kusvika pese pese pabhora rekupedzisira richivayambira kune yekuvandudza, email, kana meseji yatarisirwa. of.
Ndinowira muboka rechipiri. Chero nguva iyo icon yangu yeApp Store paunowana buruu tsvuku inonditaurira nezve iPhone app update, ndinosvetuka kuti ndiwane yazvino vhezheni nekukurumidza kupfuura zvaunogona kuti 'Twitter.'
Saka unogona kufungidzira kushungurudzika kwangu, uye ndinogona kufungidzira zvako, apo avo maapplication eApple vasingazogadzirise. Iri idambudziko rinotambudza vazhinji vashandisi ve iPhone!
Nei Ndisingakwanise Kuvandudza Mapurogiramu Pane Yangu iPhone?
Kazhinji yenguva, haugone kumutsidzira maapplication pa iPhone yako nekuti yako iPhone haina yakakwana nzvimbo yekuchengetera, kana nekuti pane chinoramba chiripo software chinoda kugadziriswa.
Matanho pazasi achakubatsira kuongorora uye kugadzirisa iyo chaiyo chikonzero nei yako iPhone maapplication asinga gadzirise!
Hapana Kamuri Yekuvandudza Kana Mapurogiramu Matsva
Yako iPhone ine yakaganhurirwa huwandu hwekuchengetedza nzvimbo maapplication anogona kutora yakawanda yeiyo nzvimbo yekuchengetera. Kana yako iPhone isinga gadzirise maapplication, unogona kunge usina nzvimbo yekuchengetera yakakwana kuti upedze iyo update.
Huwandu hwenzvimbo yauinayo maapplication pane yako iPhone zvinoenderana nerudzi rweiyo iPhone yawatenga.
Ongorora: GB inomirira gigabyte . Icho chidimbu chekuyera kwedhijitari data. Muchiitiko ichi, inoshandiswa kurondedzera imba iyo yako iPhone inofanirwa kuchengeta mifananidzo, maapplication, mameseji, uye rumwe ruzivo.
Unogona kutarisa huwandu hwekuchengetedza pane yako iPhone nekuenda ku Zvirongwa -> general -> iPhone Kuchengetedza . Iwe uchaona kuti yakawanda sei kuchengetedza inoshandiswa uye yakawanda sei inowanikwa. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeapi maapplication ari kumedza nzvimbo yako yekuchengetera, peta pasi uye iwe uchaona runyorwa rwekuti ndeapi maapplication ari kutora iyo yakanyanya nzvimbo pane yako iPhone.
Maitiro Ekugadzira Space YeApp App
Kana iwe wave kuda kushaya nzvimbo, haungakwanise kumutsiridza maapplication eApple kana kurodha matsva. Zviri nyore kubvisa mapurogiramu ausingachashandisi kuita nzvimbo yezvitsva.
Dhinda uye ubatisise purogiramu yaunoda kusunungura kusvikira menyu yaonekwa. Wobva wadzvanya Bvisa App . Tinya Delete App apo shanduko yekusimbisa inoonekwa pachiratidziri.
Meseji kana iMessage hurukuro, mapikicha, uye mavhidhiyo zvimwe zvingangoitika ndangariro hogs. Delete marefu ekutumira mameseji uye fambisa midhiya kukombuta yako kuchengetedza nzvimbo pane yako iPhone. Iwe unogona zvakare kuwana mamwe ekuchengetedza mazano mu Zvirongwa -> General -> iPhone Kuchengeta .
Paunenge iwe waburitsa mukamuri pane yako iPhone, edza kurodha pasi iyo iPhone app kugadzirisa zvakare. Dambudziko rinogona kugadziriswa ikozvino kuti nzvimbo yekuchengetera iri pachena.
Yangu iPhone Mapurogiramu Zvakadaro Hazvizo Gadziridza
Kana iwe uine yakawanda nzvimbo pane yako iPhone, kana iwe ukaita yakawanda nzvimbo uye iyo iPhone app ichiri isinga gadzirise, enda padanho rinotevera.
Edza Kubvisa, Wobva Waisazve iyo App
Kana iyo app ikambomira paunenge uchivandudza, software software kana yakashata app faira inogona kunge iri chikonzero chako chako iPhone app chisingazogadzirise. Iwe unogona kusunungura iyo app uye kuisazve iyo nekutevera matanho mamwe chetewo iwe aunogona kushandisa kuita nzvimbo yeyekuvandudza:
Bata munwe wako pasi pane iyo icon icon uye unomirira kuti izununguke.
Dzvanya X iri kumusoro kwekuruboshwe-kona kuti ubvise iyo app.
Dzorera yako iPhone kweinenge makumi matatu masekondi, wozoidzosera.
Shanyira iyo App Store uye tsvaga iyo app yauchangobva kudzima.
Dhawunirodha app zvakare.
Kuisazve iyo app kunozobvisa yako mushandisi data kubva kuapp, saka ita shuwa kuti unochengetedza chero ruzivo iwe rwaunoda kuti upinde zvakare mukati.
Inogona kunge Yako Internet Kubatana Inogona Kukonzera?
Kuti utore download yeApple app, unofanirwa kubatika kune Wi-Fi kana nharembozha yako. IPhone yako inofanirawo kuziva kuti zvakanaka kushandisa chinongedzo ichocho kurodha pasi pekuvandudza app.
Ita Kuti Chokwadi Ndege Mode Isina Kuvhurika
Kana Ndege Mode yakavhurwa, haugone kumutsiridza maapps pane iPhone yako nekuti hausi kuzove wakabatana neWi-Fi kana yako nharembozha. Kuti uve nechokwadi chekuti Ndege Mode yadzimwa, vhura iyo Zvirongwa app uye uone kuti switch iri padyo neAirplane Mode yakaiswa kuruboshwe.
Tarisa kubatanidza kweInternet
Kushandisa netiweki yeWi-Fi kurodha pasi magadziriso eapps akanaka nekuti haishandise yako cellular data plan. Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti maapuro ekuvandudza ayo ari zana megabyte kana kupfuura anogona kungotora paWi-Fi.
Unogona kuziva kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi network nekuenda ku Zvirongwa -> Wi-Fi . Shanduko iri padhuze nesarudzo yeWi-Fi inofanira kunge iri girini, uye zita renetiweki yauripo inofanira kuoneka pazasi payo chaipo.
Kana iwe usina kubatana neWi-Fi, tinya iro bhokisi riri padhuze ne Wi-Fi sarudzo kubatidza Wi-Fi. Sarudza network kubva pane rondedzero yemuno maWi-Fi sarudzo. Edza kumutsiridza yako iPhone maapps zvakare kana Wi-Fi yakavhurwa ..
Shandisa Cellular Data Kugadziridza Mapurogiramu
Kana iwe usina Wi-Fi, unogona kushandisa yako nhare yenhare yekubatanidza kugadzirisa maapp. Kuti utarise yako nhare yekubatana, vhura Zvirongwa uye tapota Cellular. Iyo switch iripedyo neCellular Dhata inofanirwa kuve yakasvibira.
Paunenge uripo, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti Roaming yakaiswa kuIzwi & Dhata pasi peMagetsi Dhata Sarudzo menyu . Izvi zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti unokwanisa kubatana kunetiweki kunyangwe yako iPhone ichifunga kuti uri kunze kwenzvimbo yekumba kwako.
Ongorora: Marongero mazhinji emaUS emahara haabhadharise zvimwe zvekufamba chero bedzi iwe uri munyika. Kana iwe uine mibvunzo nezve kutenderera mareji kana izvo zvinorongwa nehurongwa hwako, tarisa kune anotakura kana kuverenga chinyorwa chedu chakadaidzwa Chii Chinonzi Cellular uye Dhata Dzinotenderera Pane iPhone?
Maapuro Asiri Kuvandudza Pane Maseru Chaizvoizvo?
Vhura Zvirongwa uye tapota App Store. Ita shuwa kuti switch iripedyo neApp Updates yakavhurwa. Kana chigadziriso cheapp chichiwanikwa, iko zvino chobva chango dhawunirodha otomatiki kunyangwe iwe usina Wi-Fi.
Dzorerazve Iyo Network Zvirongwa
Imwe nzira yekupedzisira yekuedza kuve nechokwadi chekuti kubatana kwako harisi iro dambudziko kupukuta yako ese maratidziro enetiweki. Izvi zvichaita kuti yako iPhone ikanganwe iyo Wi-Fi network iyo yairi kushandisa. Ichaisawo chero marongero ekubatanidza kumashure nenzira yavakauya nayo apo iPhone yaive nyowani.
Kana marongero ekubatanidza ari ekupa mhosva kune maapplication eApple ayo asingazogadzirise, izvi zvine mukana wakanaka wekugadzirisa dambudziko. Iwe unofanirwa kupinda mukati zvakare kune yako Wi-Fi network, saka ita shuwa kuti iwe unayo yako Wi-Fi password inobatsira.
Kuti ugadzirise zvakare maratidziro ako enetiweki, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa .
Dambudziko neApp Store
Dzimwe nguva maapplication eApple haazogadzirise nekuti pane dambudziko neApp Store. Kunyange zvisingaite, iyo App Store server inogona kuenda pasi. Unogona kutarisa kuti uone kana Apple iri kunetseka neApp Store nekutarisa yavo system mamiriro webhusaiti .
Mira Uye Dzorerazve Iyo App Store
Kana maSeva eApp Store aripo uye achimhanya, asi maapplication ako e iPhone haagadzirise, panogona kunge paine software diki ine App Store pane yako iPhone. Kugadzirisa iri dambudziko rinogona kuitika, isu tichavhara kunze kweApp Store uye nekuivhura zvakare.
Kuti uvhare kunze kweApp Store, tinya bhatani repamba kaviri mumutsara. Wobva wasvaira iyo App Store kumusoro uye kubvisa iyo skrini. Mira masekondi mashoma, wobva wavhurazve iyo App Store.
Tarisa Yako Apple ID
Zvichiri kusashanda? Ita shuwa kuti wapinda muApp Store neApple ID chaiyo, wozoedza kubuda muApp Store uye nekudzoka mukati. Kuti uite izvi:
Mupumburu pasi uye vawane Buda .
Paunobuda, iwe unozotorwa udzokere kune iyo huru peji reZvirevo. Tinya Saina mu iPhone yako pamusoro pechiso kuti upinde zvakare muApple ID yako.
Bvisa App Store Cache
Kufanana nemamwe maapplication, iyo App Store inochengeta backup yemashoko ayo ayo anowanzo shandisa, saka inogona kushanda nekukurumidza. Nekudaro, matambudziko ane cache iyi yeruzivo anogona kukonzeresa nyaya muApp Store, sekudzivirira ako maapplication eApple kubva pakuvandudza.
Kuchenesa yako App Store cache, vhura iyo App Store uye wobva wadzvanya pane imwe yematepi pazasi kwechidzitiro kagumi kakateedzana. Ita shuwa kuti wabaya nzvimbo imwechete kagumi mumutsara. Chidzitiro chinofanira kupenya chisina chinhu uyezve iyo app ichadzosera otomatiki.
Batidza otomatiki Dzokorora Pane Komputa Yako
Kana maapplication ako akasazogadziridza pane yako iPhone, unogona kunge uine rombo rakanaka rekuvandudza maapps pakombuta yako. Kuvhura otomatiki zvigadziriso kubva pakombuta yako, batanidza yako iPhone kune komputa yako uchishandisa yako Mheni tambo, wobva wavhura iTunes.
Iyi sarudzo haisi kuwanikwa paMacs anomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani.
Dzvanya iTunes mukona yekumusoro kuruboshwe rekona uye tinya Zvaunoda .
Chekupedzisira, tinya pakuteedzera tebhu, tarisa pamabhokisi ese, wobva wadzvanya Zvakanaka .
Be Kuenda, App Gadziridza Notifications!
Kana iwe waedza zvese izvi zvinhu, uye hapana chinoratidzika kunge chiri kushanda, unogona pukuta yako iPhone uye kuidzosera . Izvi zvinobvisa zvese zvako zvegadziriro uye maapplication kubva kuiyo iPhone, saka uchafanirwa kumiseta zvakare senge nyowani.
apuro wachi bhatiri inodonha nekukurumidza
Zvinogona kushatisa zvisingaite kana yako maapplication eApple asinga gadzirise. Nekudaro, ikozvino une maturusi uye manomano aunoda kugadzirisa dambudziko iri.
Une imwe nzira yaunofarira yekuita kuti maapplication eApple agadzirise? Regai tizive mune zvakataurwa!